BOLOTNIK (CALLITRICHE) - WARSHAD LOOGU TALAGALAY KAYDKA: SHARAXAADDA, BEERASHADA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Bolotnik (Callitriche): sharaxaadda geedka, beeritaanka, daryeelka
Biyaha beerta, xitaa hadday yar yihiin, waxay noqon karaan quruxda. Laakiin tani ma aha mid ku filan joogitaanka barkada muraayadda. Boorash noocee ah ayaa loo baahan yahay in loo habeeyo si waafaqsan, oo ay ka mid yihiin dhirta biyaha laga helo.
Mid ka mid ah dhirtaas, badanaa loo isticmaalo naqshada muuqaalka, waa dabayl.
Xubno ka mid ah Bolotnik genr (Callítriche), oo sidoo kale loo yaqaan "xiddigaha biyaha", ayaa ka tirsan qoyska Podorozhnikov. Cudurkaan waxaa ka mid ah 63 nooc oo dhirta dilka ah iyo sanadlaha ah, taas oo inta badan ku koraaya jidhka biyaha, qayb ahaan ama gebi ahaanba biyo ku dhex qulqulaya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira noocyo kala duwan oo ku faafaya dhulka. Naqshadda muuqaalka, noocyada biyaha sida caadiga ah ayaa loo adeegsadaa, tusaale ahaan, bogga dambe (Callitriche palustris), ama caadi ahaan. Waxaan si faahfaahsan uga fiirsan doonaa.
Baro sharciyada daryeelka iyo xulashada dhirta biyaha, iyo sidoo kale daraasad dhirta ugu fiican ee balli.
Tani dhirta dilka ah ee dilka ah oo leh dherer ah 3 illaa 50 cm, foomamka dabaasha rosettes ee caleemaha iyo ubaxyada. Marka qalajinta, biyaha gacmeedku waxay sameeyaan qaab dhul ah oo leh cufnaan afkoda iyo cirifka cirifka ama caleemaha qumman. Qaybta hoose ee bogga waxay leedahay caleemo wareeg ah oo ah qaab muuqaal ah ama cidhiidhi ah. Caleemaha dusha sare ayaa ah cagaar, caleenta, ama ovate, inta badan wareega wareega, sameynta xiddigo qurux badan leh. Kobcinta meelo qoto dheer, dhirta ayaa laga yaabaa inaanay gaarin dusha.
Ma taqaanaa? Dhirta ugu weyn ee biyaha leh ee caleemaha leh waa Fiktooriya, oo ka tirsan qoyska Nymphaeaceae oo sii kordhaya ee Amazon. Caleemooyinkeeda waxay gaartaa saddex mitir dhexdhexaad ah waxayna awoodaan in ay u adkeystaan ​​50 kg.
Ubaxku waa mid yar, cagaaran, adagtahay in laga gooyo asalka guud, illaa 1 cm oo dhexroor ah, waxay ka baxaan min Maajo ilaa Sebtembar. Waxay ku talaaleen biyo. Miraha waa sanduuqyada cagaaran-cagaaran oo ay ku jiraan miraha.
Habitat iyo habitat
Warshadu waa mid aad u baahsan. Dabeecadda, waxaa laga helaa dhammaan Yurubta, aagga cimilada cimilada ee Asia, xaaladaha cimilada ee waqooyiga Ameerika.
Boggu wuxuu badanaa ku koraa biyo yar yar ee harooyinka, balliyada, qafisyada, iyo sidoo kale xayawaan badan, carrada wakhti go'an daadad ahaan. Qodobka ugu muhiimsan ee loogu talagalay waa qiyaastii 20-30 cm Marka heerkulka biyuhu ku dhaco kaydadka, marshaha bogga ayaa isbedelaya qaabka dhulka.
Abuurka bogga caadiga ah waxaa laga iibsan karaa dukaamo khaas ah ama lagu dalbado boostada. Uma baahnid wax farsamo ama biqin ka hor inta aan la beeri.
Seeds waxaa ugu wanaagsan in la beeray isla markiiba ka dib iibka, sababtoo ah iyada oo aan qoyaan, iyagu ma sii dheeraan waayey. Waxa lagu kaydin karaa wakhti yar, si ku meelgaar ah u soo degay weel leh carrada la isku qurxiyo.
Tan iyo bogga waa mid aad u qabow u adkaysta, waxaa loo oggol yahay in ay abuurto miraha guga marka ay kaydka ka bilaawdaan barafka.
Hannaanka degitaanka waa mid fudud:
Weelka loogu talagalay beeritaanka waxaa ka buuxsamaya ciidda (dhoobada ayaa ugu haboon).
Seeds waxaa lagu beeray dhulka, xoogaa la aasay.
Weelasha leh abuurka la beeray waxaa la dhigaa dhinaca hoose ee kaydka, oo aan kudhicin wax ka badan 30 cm (beeray qoto dheer oo ka mid ah dhirtu waxay u egtahay mid aad u fiican).
Waa muhiim! Markaad beerto, waxaad samayn kartaa weel la'aan iyo abuur si toos ah ilaa hoose ee kaydka ama aagga xeebta qoyan, iyaga oo qodaya dhulka si shimbiraha aysan u daboolin ama u daadin.
Bolotnik sii kordhaya balli ornamental uma baahna daryeel gaar ah. Ka dib markii la beero, dhirtaas badiyaa waxay ku kobcisaa by is-goosashada, waxaa la pollinated biyo. Waqti ka dib, bogga si weyn ayuu u kori karaa, ka dibna waa inuu soo saaraa qadhaadh. Uma baahnid tayada gaarka ah ee biyaha, wuxuu si fiican u horumariyaa balli caadi ah, oo loo nadiifiyo sida ugu muhimsan.
Mararka qaar dhirta waxaa lagu koray aquearium ama weel kasta oo awood u leh inuu haysto lakabka ciidda 5-7 cm iyo lakab oo biyo ah 20-25 cm. Xaaladdan, weelka leh bogga waxaa badanaa lagu qabtaa dibadda.
Horumarka caadiga ah, waxaa lagu talinayaa in la dhigo meel qorrax leh ama hooska qayb ahaan. Wakhti ahaan, gaar ahaan maalmaha kulul, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro biyo diirran oo heerkulka qolka ku dhex jira taangigan.
Waa muhiim! Goobta qulqulaya ee ku taala aquarium waxay u baahan tahay joogitaan joogta ah oo ku yaal deegaan biyaha ah. Iyada oo habkan sii kordhaya, dhirta biyaha-dhirta si degdeg ah u dhinto.
Bolotnik waxay u adkaysataa ma aha oo kaliya qabow, laakiin sidoo kale cudurada. Cudurada sifaha geedkaan lama calaamadeeynin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhibaatooyin noocaas ah:
Waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo waxyeelo sababtoo ah koritaanka xad-dhaafka ee noocyada qaar ka mid ah algae aan cagaarka lahayn. Koritaanka noocan oo kale ah ayaa keena biyo si uu u barbardhigo, iyada oo ay weheliso kororka dioxide iyo alaabta sunta sunta. Si kastaba ha noqotee, dejinta qoyan ee kaydka (ugu yaraan saddex meelood oo meel sare), wakiilada noocan ah ee floraarka biyaha, sida ubaxyada biyaha, nodules iyo bogag isku mid ah, ubaxu ma noqdo mid aan macquul ahayn.
Kaneecada-cryototopus waxay dhigi kartaa ukunta caleemaha geedka. Qaadida dirxiga waxay cunaan unugyada jilicsan ee dhirta. Waxay la dagaallamayaan dhibaatadan iyada oo burburiya dhirta waxyeelada leh, iyo sidoo kale isticmaalka dabaysha kaneecada.
Qosoliyeyaashu waxay noqon karaan dabeylo sida sniperyada caadiga ah. Caadi ahaan waxay cunaan qashinka dabiiciga ah ee ku urursan hoosta, laakiin ka dib marka aad u badato, dhirta caafimaad leh waxay bilaabi karaan inay cunaan. Xaaladdan oo kale, si loo yareeyo tirada dadkooda, waxay u ururiyaan dhareerka gacanta.
Ma taqaanaa? Bogga sii kordhaya dabeecadda ayaa muhiim u ah kalluumeysiga. Xannhadu waxay u adeegtaa sidii magangalyo oo loogu talagalay xoolaha kala duwan ee biyo-biyoodka iyo dirxiga, waxay ka ilaaliyaan shiilaha si fiican. Meeshii kalluunka la dhigo ukunta. Cabbirka bogga la soo saaro inta lagu jiro nadiifinta meydka biyaha ayaa u adeegi karaa bacriminta aad u fiican.
Habka dhirta ee dhalmada ee dhirta this si ballaaran loo isticmaalo. Si tan loo sameeyo, samee talaabooyinka soo socda:
Iska jar qayb ka mid ah asliga ah ka soo baadiyaha hooyada.
Iska yaree caleemaha xirxidhka ah ee qaybta hoose.
Ku rid shixnadda ka hooseysa.
Sidii loo abuuray ayaa loo dhigaa biyaha.
Caleemaha habkan loo beerto waxaa lagu qaadaa kaydka (labadaba iyo dabiiciga) oo leh bog horey u sii kordhaya. Waxay gooyaan "isku dhafka" (internode) ee asliga ah. Qeybaha gooyaa ee geedka ayaa si taxadar leh loo kormeero, caleemaha waxyeellada ah ayaa la soo saaraa, iyo sidoo kale clams, cayayaanka, iwm. Marka, caleemaha la soo xulay waa la dhaqay, ka dib kuwaas oo lagu beeray sida kor lagu sharaxay.
Baro sida loo daryeeli karo duufaan wadnaha ah, qolfaha, eyhorniya.
Marka laga reebo habka dhirta, noocyada noocan oo kale ayaa abuuraya iyo abuur, iyada oo aan waxqabadka aadanaha. Cagaarka boggu wuxuu ku dhacaa afar qaybood, mid kasta oo ka mid ah waxa ku jira abuur. Qeybahaasi waxaa soo maraya biyo hareerihiisa hareerihiisa, iyo hal mar dhulka, waxay si deg deg ah u baxsadaan.
Sida aad u arki karto, bogga waa shey aad u soo jiidasho leh oo loogu talagalay dejinta balli qurxoon. Warshad Tani waa wax aan qabyo ahayn, adkaysi u ah cudurrada iyo cayayaanka, si kastaba ha ahaatee, marka lagu daro shaqeynta suuxinta, waxay gacan ka geysataa abuurista biocenosis ee kaydka. Dhammaan daryeelku waa kaliya ee khafiifinta marxaladda qallafsan ee la socdo.
Wuxuu u eg yahay bog: video